El Apapacho-Indlu efudumeleyo nekhululekileyo eCariló. - I-Airbnb
El Apapacho-Indlu efudumeleyo nekhululekileyo eCariló.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLui
Indlu ibekwe kwiibhloko ezisi-7 ukusuka kwi-spa yaseHemingway kunye ne-7 ukusuka kwindawo yokuthenga, kwibhloko ethule kakhulu ngaphandle kwetrafikhi.Yenzelwe ukujonga intuthuzelo kunye nokufudumala ukonwabela amaxesha amahle kunye nabahlobo okanye usapho. Inamagumbi okulala ama-4, ama-3 kuwo en-suite.Ikhitshi kunye negumbi lokuhlala lidityanisiwe kwaye linefestile enkulu ukuze ujabulele umbono omhle wegadi.Umgangatho wayo otofotofo unegrill, ilungele ukonwabela ibarbecue emnandi okanye isidlo sakusasa kusasa.
Umyezo ubanzi kwaye uneentlobo ezininzi zemithi enika umthunzi omhle ehlotyeni; ukuphumla kwi-hammock yaseParaguay emthunzini wepayini ngumzuzu obalaseleyo.Idesika encinci emazantsi egadi inika indawo efanelekileyo yokuhlala kwaye ube namaqabane amnandi.Umva wendlu unocingo locingo oluthi, kunye nezityalo, zenze umoya wobudlelwane obusondeleyo kunye nokuzimela.
Kukho iiTV ezimbini (enye kwigumbi eliphambili), kunye nenkonzo ye-TV eNgqo.
4.91 · Izimvo eziyi-43
Indawo ilungele ukuqala uhambo olude, kubandakanya, kunye nentando yam, kumda wendawo yegalufa.Ibekwe kufutshane nombindi (10 ') kodwa ukude ngokwaneleyo ukuze oku kungachaphazeli ukuzola kwendlu ngexesha lonyaka.Indawo izolile kakhulu, iSitalato iMagnolia sinebhloko enye kuphela ubude, nto leyo inciphisa izithuthi kubahlali bayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Lui
Ngexesha lokuhlala kwakho, unokunxibelelana nam. Kwimeko yongxamiseko, uPedro, umntu oye wanyamekela indlu kangangeminyaka eli-15, uya kufumaneka ukuze akuncede kuyo nayiphi na ingxaki enokuvela ngendlu.